11 / 10 / 2019 | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
Ụbọchị: 11 October 2019
Ngwa eji edo edo edo nke minibuses malitere na Malatya
Ọchịchị nke Malatya, nke bịanyere aka na ọtụtụ ihe ọhụrụ, achọpụtawo nke mbụ site na ịsụ ụzọ mmejuputa uwe ụmụ obere obere obere. Ngwa a bidoro na Koyunoglu Minibus Stop, nke ahọrọ dika ọdụ ụgbọ. Emere ememe maka ngwa ahụ na nkwụsị. ememe [More ...]
Tram na-arụ ọrụ na Eskişehir dechara Ọrụ na Street na Boulevard
Obodo Eskişehir Metropolitan na-aga n'ihu na-ewu okporo ụzọ, na-arụzi ya na arụzi ya na etiti obodo na ime obodo. Tupu oge udu mmiri, ọkachasị n'okporo ámá na boulevards ebe arụ ọrụ tram, otu ndị na-arụ ọrụ mgbapụta, ụmụ amaala nke oge oyi. [More ...]
Mersin Metropolitan Municipality Mayor Vahap Seçer, ogbako mkparita akwụkwọ nke metro project mere, ụbọchị izizi nke a ga-eme na Hal, ihe nlele nke ime obodo, ndị uwe ojii ndị guzobere ọhụrụ, bọs ndị a ga-ebuga na atụmatụ ukwu nke mbara ala ahụ emeela ọtụtụ nyocha. [More ...]
Nchịkwa Obodo Kyiv na-agwa Trajshchev Metro
Enwere ike iwu ụzọ ụgbọ oloko na Trotschynia n'agbata afọ 5-7-10 ma ọ bụrụ na enyere ego maka ya. N'ajụjụ ọnụ ya na onye isi ndị isi na Kyiv City nchịkwa Nikolai Povoroznik Skyscraper kwupụtara nke a. Ndị China maka owuwu nke ey Trojshchina (Троєщина) metro [More ...]
Ndị ọrụ GAZİULAŞ Ga-ekwu Asụsụ Ogbi
A ga-enye ndị obodo Gaziantep obodo ukwu ọzụzụ gbasara ọzụzụ ụlọ ndị ọrụ nke Ngalaba Transportgbọ njem ga-enweta ọzụzụ asụsụ ogbi. Obodo a ga-akwado onye ntị chiri ya na onye ọrụ 750 na ọzụzụ a chọrọ ka emeghasị ntị chiri na ndụ mmekọrịta. “Ezigbo Enyi [More ...]
Akwụsịla oru ngo ụgbọ ala Trabzon?
Nzukọ Nzukọ Mgbakọ ukwu nke Trabzon taa bụ nke emere n'ụlọ nzukọ kansụl n'okpuru ndị isi nke Mayor Mayor Atilla Ataman. Ekwuputara na ọrụ ụdọ ahụ zubere ka obodo ukwu mepere emepe si Trabzon ruo Boztepe na Trabzon kagburu n'ihi mkpebi ụlọ ikpe. Na isiokwu [More ...]
Nleta Ndị nwe Ugbo! .. Ngwụsị izu, 81 Province, Radar Speed ​​Control ga-eme
Ministri nke ime obodo General Director nke Security 81 Ngalaba ndị uwe ojii, Gendarmerie General Command, vinlọ Ọrụ Ọchịchị Nchịkwa Ọchịchị, EGM Special Pen Directorate ezipụla ntụziaka maka ngwa radar ga-eme. AKWSTRUCTIONKWỌ AKW WKWỌ AKW WITHKWỌ KWES WITHR WITH 81 [More ...]
Oge Eke Ọhụụ Ga-amalite itinye ego na ụzọ ụgbọ oloko na mpaghara Aegean
Onye isi nchịkwa ụgbọ njem TCDD Kamuran Yazıcı gara 9 na Ọktọba wee leta ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na mpaghara ụgbọ okporo ígwè na İzmir na obodo ndị gbara ya gburugburu. Ọ gara azụmaahịa obodo. N'ime ogo nleta a, Manisa ahaziri ụlọ ọrụ [More ...]
Kazakhstan Railways Inc. (KTZ) Onye isi oche Pavel Sokolov, ndị nnọchite anya, TCDD General Manager Ali İhsan Uygun na TCDD Transportation Inc. Onye isi njikwa Kamuran Yazıcı gara na 10 October 2019 na TCDD General Directorate na Thursday. abụọ [More ...]
FirstSPARK Womenmụ nwanyị Ndị Ọrụ Mbụ na Ọrụ
Nsogbu nke are Enweghị ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ na İSPARK ği nke IMAM President PresidentBB zụlitere ugboro ugboro, mechara dozie ya na njikwa ọhụrụ. Femalemụ nwanyị mbu nke İSPARK, Derya Atacan na Zülfiya Işan rụrụ ọrụ ha. Atacan, İSPARK Market na Mmekọrịta [More ...]
A ga-emegharịrị Unkapanı Junction n'ime akụrụngwa Tram Project
IMA emeela ihe iji mee ka ọfụma njikọ Unkapanı nke dị egwu. N'ime oke ọrụ ahụ, a ga-ewu ọwara nke Eminönü - Alibeyköy Tramway ga-agafe. Obodo Obodo Istanbul (IMM), Unkapanı, ebe enwere omumu ihe omimi na omumu ihe omumu na 2012 [More ...]
3 Multi-Storey Istanbul Tunnel Project Na-aga na Obi
3 Ft Large Ọwara Istanbul nke Turkey si mega oru ga-aga ka obi anya. Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, kwuru, sị: ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke obodo na ndị si mba ọzọ na-egosi nnukwu mmasị na ọrụ ahụ anyị na-eme atụmatụ iji kredit. Onye Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa Cahit [More ...]
Ndị ọka iwu na-ekwu 'usoro ụgbọ okporo ígwè bụ ihe a chọrọ'
Populationbawanye onu ogugu ma na-eto ụbọchị nke ọ bụla na-agafe agafe, nsogbu kachasị na Sakarya na-egosi na ụmụ amaala okporo ụzọ, naanị ihe ngwọta bụ usoro ụgbọ okporo ígwè, o kwuru. Citizensmụ amaala na-ekwu na ha abịaghị n'oge maka usoro ụgbọ okporo ígwè, meghachiri na Obodo ukwu. Onu ogugu ndi mmadu n’obodo anyi [More ...]
11 na akụkọ 1872 October 1 980 nde 1 puku nke 230 nde 11 puku ego agbatị nke ụzọ okporo ụzọ Rumeli ka erere. Owuwu nke Skopje-Mitrovica na Tarnova-Yambol bidoro. Similarzọ ilzọ Railway na Cable Car NewsHistory Taa: XNUMX [More ...]